भारतमा आज अन्तिम चरणको चुनाव ! - Sabal Post
भारतमा आज अन्तिम चरणको चुनाव !
भारतमा लोकसभाको सातौं तथा अन्तिम चरणको मतदान भइरहेको छ । भारतमा ११ अप्रिलबाट लोकसभा चुनाव सुरु भएको थियो । आज अन्तिम चरणको चुनाव सकिएपछि २३ मेबाट मतगणना सुरु गर्ने तयारी छ । साँझ ६ बजेसम्म मतदान हुने र त्यसपछि मत सर्वेक्षणका नतिजाहरु सार्वजनिक हुने छन् ।
यसैगरी क्रिकेटर हरभजन सिंहले जालन्धरको गढी गाउँबाट मतदान गरे । मतदानपछि उनले भने– मेरा मुद्दा सफाई, बच्चाको पढाई, खेलकुदको राम्रो पूर्वाधार निर्माण हो । कृपया तपाईंहरुले भोट हाल्नुहोस् । यसको गम्भीरतालाई बुझ्नुस् । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले गोरखपुरबाट मतदान गरेका छन् । मतदानपछि उनले चुनावप्रति पूरै देशभर उत्साह रहेको बताए ।
बंगलादेशमा जारी खेलमा नेपाल इमर्जिङ टिम्स एसिया…
भारतको हेपाई कहिले सम्म?महाकाली नदीमा पनि देखायो…
मन्त्री विष्ट भन्छन – ‘सामाजिक सुरक्षा योजना…
सिसहनियामा कन्य च्याउ उत्पादन तालिम सुरु